downloads 7 579
Erwin Welker, Shessi, Hauke ​​Keitel, Greg Iwu
The Focke-Wulf Fw 200 Condor bụ a German ụgbọ njem ụgbọelu njem ma ọ bụ ibu na 1938, converted n'ime Maritime patrol ugbo elu n'oge Agha Ụwa nke Abụọ.
Ewubere ngwugwu a maka FS2004 na FSX/P3Dv1V2 +. Zuru ezu add-on ya na akwa gauges na ụda omenala.
N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, Fw 200 e emeziri maka nzube nke Luftwaffe. Ọ na-karịsịa mma ruru eru maka nyoputa onyeiro ọzọ n'oké osimiri dị ka a otu bombu. Ọ na-emejuputa atumatu dị ka otu ìgwè na submarines. The Fw 200, bụ nke e utu aha "ihe otiti nke Atlantic" site Churchill, efehe Ọtụtụ Allied ahịa Ụgbọ mmiri mgbe ha na-eji dị ka patrol / atụ bọmbụ n'elu Atlantic ruo mgbe 1943.
Personal Fw 200 Condor si Adolf Hitler, nēbu Insignia nke Die Fliegerstaffel Fuehrers na imi
Onye edemede: Erwin Welker, Shessi, Hauke ​​Keitel, Greg Iwu